Sina Lift fanamboarana fiara mpanamboatra sy mpamatsy | Ruiyi
Ny fiakarana fanamboarana fiara azo alaina dia azo nakarina, famolavolana vaovao, mora ampiasaina, ampiasaina indrindra amin'ny fikojakojana fiara, ny fampiasana an'io fitaovana io dia afaka mampiakatra mora foana ny haavon'ny fiara, ny mpiasa hikarakara mety hanamboatra ny fiara.
Mirefy 115cm ny vokatra ary afaka miakatra sy milatsaka amin'ny ambangony 25-38cm. Vita amin'ny vy izy io ary manodidina ny 19-25kg ny lanjany tokana.
ny manainga lalamby fanamboarana fiara azo atsangana, vaovao famolavolana, mora ampiasaina, ampiasaina indrindra amin'ny fikojakojana fiara, ny fampiasana an'io fitaovana io dia afaka mampiakatra mora foana ny haavon'ny fiara, mety mpiasan'ny fikolokoloana amboary ny fiara.
Fanamby ny fiara fanatanjahan-tena satria ambany amin'ny tany izy ireo ary tsy mifanaraka amin'ny tavy mahazatra satria mideza loatra ny fironana.
Ireto tanjakan-kazo ambany ireto no vahaolana. Ny firongatra dia degre 11,5 malefaka ary mirefy 66 santimetatra ny halavany.
Raha vantany vao eny amin'ny lampihazo ianao, dia hampiakarina amin'ny 7 santimetatra hiala ny tany ny fiaranao. Ity andiana fiakarana roa ity dia 14 santimetatra ny sakany eo amin'ny lalambe ary 16 santimetatra ny sakany eo amin'ny lampihazo.
Eo koa ny fijanonan'ny kodiarana. Manana lanjan'ny 3.000 pounds izy ireo.
Ny fananganana aliminiôna an'ireo fiakarana ireo dia mahatonga azy ireo haharitra. Ny firongatra lava kokoa dia mety indrindra ho an'ny fiara ambany-tany izay tsy ho azonao aleha.
Izy ireo koa dia manana fehikibo fingotra eo amin'ny farany ambany Vonjeo mijanona am-pilaminana izy ireo rehefa mitondra ny fiaranao ho any aminy ianao.
Mampalahelo fa manana ny lanjan'ny lanjany ambany indrindra izy ireo. Tsy tokony ho olana amin'ny fiara fanatanjahan-tena kely kokoa izany fa mety ho olana amin'ny kamio na ny fiara ambany na ny mavesatra kokoa.
Ny lasitra koa dia tsy ny tsara indrindra ary mety hitera-doza ho vaky.
Ity andiam-bitsika ity dia natao hampiasaina amin'ny kamio na fiara lehibe hafa. Izy ireo dia voasedra amin'ny fampiasana azo antoka hatramin'ny 7000 pounds.
Ny velarana tsirairay dia 16 santimetatra ny sakany eo amin'ny lalambe sy ny lampihazo.
Izy ireo dia manana volavolan-tsipika miampita miaraka amin'ireo zana-tohotra tsirairay izay manana haavon-tserotra mifangaro.Any amin'ny faran'ny sehatra dia misy fijanonana misy kodiarana mitsangana.
Izany dia hanome anao toerana malalaka hiasa ao ambanin'ny fiara.
Ny fijanonana kodiarana lehibe dia tsara mikasika hitazomana anao tsy hihodinkodina lavitra loatra ary hiala ny faran'ny lalambe.
Ny firafitra mihetsiketsika mihetsiketsika amin'ny tohotra dia manome antoka ny kodiaranao hahazo kofehy azo antoka ary hanampy amin'ny fitazonana ny tavy eo am-pamiliana azy ireo.
Anaran'ny marika Jumei
Amin'ny fikojakojana ny milina fiara dia azo atsangana ny haavon'ny fiara. Ataovy eo ambanin'ny kodiaran'ny fiara ny fitaovana hampiakarana ny fiara ary hampiharihary ny toerana hidiran'ny mpiasan'ny fikolokoloana
Izy io dia fitaovana fikojakojana fiara mety indrindra sy azo ampiharina amin'ny fizahana sy fikojakojana ao ambanin'ny fiara, miaraka amin'ny fahaizany mitondra tsara
Ity paosy fiara ity dia mety amin'ny fampiasana azy amin'ny atrikasa, garazy na trano.
Namboarina tamin'ny vy mavesatra.
Maharitra: Vita mena.
Tafiditra ao anaty varingarina hidrolika.
Miaraka amin'ny Jack namboarina.
Fahaizana mampiakatra 2000 kg
Ho an'ny kodiarana hatramin'ny 245mm (kodiarana midadasika)
Halavany tanteraka: Drive 1150mm.
Haavo azo ovaina avy amin'ny 270mm ka hatramin'ny 375mm 1 varingarina / isaky ny singa.
Haben'ny ramp: 1150 x 240 x 270mm (L x W x H)
Haben'ny sehatra: 380 x 250mm (L x W)
Teo aloha: Kodiarana fingotra
Manaraka: Sarin'ny bisikileta
Caster Wheel, China Concrete Mixer, Kamio mixer, Sina PU Foam Wheel, China PU Wheel, Kodiarana PU,